UNWTO General Assembly Kumisikidzwa Kunokurudzirwa: WTO Yakamisikidzwa Nekusingaperi!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » UNWTO General Assembly Kumisikidzwa Kunokurudzirwa: WTO Yakamisikidzwa Nekusingaperi!
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • Kufamba Wire Nhau • Wtn
Iyo General Council ye World Trade Organization (WTO) yakabvumirana mukupera kweChishanu (26 Mbudzi) kuti imbosendeka Musangano weMinisteri mushure mekuputika kwechirwere cheOmicron Covid Variant B.1.1.529 chakaita kuti hurumende dzinoverengeka dziise zvirambidzo zvekufamba izvo zvingadai zvakatadzisa makurukota mazhinji kusvika kuGeneva.
Pakanga pasina mhinduro apo eTurboNews contacted the World Tourism Sangano (UNWTO) kana iyo General Assembly iri kuuya muMadrid yakarongerwa nguva yakafanana neiyo WTO General Council yaizomiswa zvakare.
Aimbove Munyori Mukuru weUNWTO, Francesco Frangialli, akadaro neChishanu achiti:
"Nekuda kwekutyisidzira hutano hutsva uye nemaonero angu, zvingave zvine hungwaru kuti UNWTO neSpain varambe nekuda kwechikonzero ichi chiri pachena uye chakasimba chehutano chekuti vamiriri nemakurukota vaende kuMadrid mumazuva mashoma.
Nhume dzinotarisirwa kusvika kubva kumativi akawanda enyika. Pamusoro pezvo, rusarura rwechokwadi rwunozokonzera kuti vamiriri vanogara munyika dzine zvirambidzo zvekufamba, kunyanya kubva kuNyika dzakati wandei dzemuAfrica hazvigamuchirwe kuSangano umo vatori vechikamu vanofanirwa kubatwa nenzira yakaenzana.
The World Tourism Network akakurumidza kurumbidza chirevo ichi chakakodzera nguva neMunyori Mukuru - Mukuru, kunyanya tichifunga nezvekukosha kweUNWTO General Assembly kune vakawanda vatori vechikamu vakanyoreswa kubva kuAfrica.
Cuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Bhodhi parizvino vari kupinda chimwe chiitiko muRwanda vari kubvumirana neWTN uye aimbove Secretary-General.
panguva World Trade Organization, Musangano weGurumende wechigumi nembiri (MC12) waifanira kutanga musi wa12 Mbudzi uye kupera kusvika 30 Zvita, asi chiziviso chezvirambidzo zvekufamba uye zvinodiwa zvekuvharirwa muSwitzerland nedzimwe nyika zhinji dzeEurope zvakatungamira General Council Chair Amb. Dacio Castillo (Honduras) kudaidza musangano wechimbichimbi wenhengo dzese dzeWTO kuti avazivise nezvemamiriro ezvinhu.
"Tichifunga nezvezviitiko zvinosuruvarisa izvi uye kusava nechokwadi kwazvinokonzeresa, hationi chimwe chingaitwe kunze kwekupa zano rekumisa Musangano weMinistry uye kuukoka zvakare nekukurumidza kana mamiriro ezvinhu achibvumira," Amb. Castillo akaudza General Council. "Ndinovimba kuti uchanzwisisa zvizere kuipa kwemamiriro ezvinhu."
Director-General Ngozi Okonjo-Iweala vakati zvimhingamipinyi zvekufamba zvinoreva kuti makurukota akawanda nevamiriri vakuru vangadai vasina kupinda munhaurirano dzakatarisana pamusangano uyu. Izvi zvaizoita kuti kutora chikamu nenzira yakaenzana kusagoneke, akadaro.
Akataura kuti nhumwa zhinji dzakaramba dzichiti musangano haupe mhando yekudyidzana inodiwa pakuita nhaurirano dzakaoma panyaya dzezvematongerwo enyika.
“Iyi yanga isiri kurudziro iri nyore kuita ... Asi seDirector-General, chinonyanya kukosha kwandiri ihutano nekuchengetedzeka kwevose vari muMC12 - makurukota, vamiriri, nemasangano akazvimirira. Zvirinani kukanganisa kudivi rekuchenjerera, "akadaro, achiona kuti kumisikidzwa kwaizoenderera mberi nekuchengetedza WTO inoenderana nemitemo yeSwitzerland.
Nhengo dzeWTO dzakabvumirana mukutsigira kwadziri kurudziro kubva kuna Director-General uye General Council Chair, uye vakavimbisa kuenderera mberi vachishanda kuderedza misiyano yavo pamisoro yakakosha.
Zvinogona kungotarisirwa kuti sangano reWorld Tourism Organisation riri pasi pehutungamiriri hwazvino uno munyori mukuru weUNWTO, VaZurab Pololikashvili, vane hanya zvakafanana nemakurukota ezvekushanyirwa kwenyika, uye vanonzwisisa kukosha kwekupa nhumwa dzinobva kuSouth Africa, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Zambia, nedzimwe. Nyika dzemuAfrica, Belgium neHong Kong zvakafanana neWorld Trade Organisation.
Nhasi Gavhuna weNew York muUnited States akazivisa mamiriro enjodzi kuNyika yake, kunyangwe pasina nyaya yehutachiwana hutsva hwati hwaonekwa.
Nyaya dzainge dzaonekwa muSouth Africa, Botswana, Belgium neHong Kong, uye dziri kutarisirwa kupararira.
KuGeneva, idambudziko reWorld Trade Organisation.
Musangano uyu wanga wakatarisirwa kwemakore mana. Uye pakanga paine sarudzo huru dzaifanira kutorwa pakutengeserana kwenyika sezvisarudzo zvemukati kuInstitute.
Chokwadi chakaomarara kune UNWTO kuita sarudzo iyi:
Iko hakuna kupihwa muUNWTO Statutes inobata neiyo mhando ye emergency mamiriro. Chirevo chete chinogona kunge chiri chinyorwa 20 cheStatutes chinopa Executive Council kugona kutora sarudzo dzese dzinodiwa pakati pezvikamu zviviri zveGungano.
Kana Kanzuru ichida kutungamira, rinenge riri basa rayo. Chinhu chikuru ndechekuti hakuna vamiriri muMadrid kunyanya vanotungamira UNWTO, sezvazvakaita nemasangano makuru pasi rese.
Zvakawanda zvinoenderana nemafungiro uye sarudzo dzeHurumende yeSpain nekuti hausi hutano hwevamiriri uye hutano hwevashandi vari panjodzi, asi kuchengetedzwa kwevagari veMadrid.